Ny fitomboana Frantsay dia tokony hahatratra ny 0,4% amin'ny faran'ny 1er, araka ny Banque de France - TELES RELAY
HOME » International Ny fitomboana Frantsay dia tokony hahatratra ny 0,4% amin'ny faran'ny 1er, araka ny Banque de France
Ny fitomboana Frantsay dia tokony hahatratra ny 0,4% amin'ny faran'ny 1er, araka ny Banque de France
Ny tarehimarika mitombo isa voalohany dia miandry fatratra ny governemanta, izay manantena ny hanakanana ny asa.
Ny tontolo miaraka amin'ny AFP Navoaka omaly tao amin'ny 09h23, updated yesterday at 09h23
Time to Famakiana 2 min.
Ao amin'ny sehatry ny indostria, dia nihena ny vokatra, indrindra fa ny fiarovana ny tontolo iainana, ny simia ary ny metallurgy. Fa ny asa dia tokony hamerina amin'ny volana febroary. JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP
Taorian'ny lafiny efatra ny malemy fitomboana, ny toe-karena frantsay dia tokony hitombo amin'ny 0,4% any Frantsa amin'ny lafiny voalohany, noho indrindra ho amin'ny fanatsarana eo amin'ny fanorenana orinasa, araka ny vinavina savaranonando tsy misarom-boaly 11 Febroary Alatsinainy teo amoron'i Frantsa, tena ny fanantenana ataon'ny governemanta. Io petra-kevitra, mifanaraka amin'ny faminaniana ao amin'ny Institut-pirenena de statistique et études économiques (INSEE), dia ho eny an-fanoharana izany amin'izao lafiny fahefatra 2018 (+ 0,3%), voasazy amin'ny ampahany ny hetsika ny "mavo palitao ".
Frantsay Banky Foibe, mifototra amin'ny ny Tombanana ho raharaha fanadihadiana isam-bolana izany, hoy ity Hiverina kely amin'ny fiakaran'ny tinady ao an-trano sy ny fanatsarana ny fanantenana ao amin'ny orinasa sy ny tolotra. Ao amin'ny fanorenana, ny fitomboan'ny asa dia nanamafy tamin'ny Janoary, indrindra eo amin'ny asa faharoa, miaraka amin'ny boky mba "Tsara be", araka ny filazan'ny orinasa vola. Ao amin'ny sehatra indostrialy, amin'ny lafiny iray, ny famokarana dia nolavina, indrindra fa ny fiarovana ny tontolo iainana, ny simia ary ny metallurgy. Saingy araka ny filazan'ny mpitarika raharaham-barotra izay nadinadinin'ny Banque de France, ny hetsika dia tokony hiverina amin'ny volana Febroary.
Ny asa fanaovan-tsakafo, mandritra izany fotoana izany, dia nihena tamin'ny volana lasa, miaraka amin'ny fihenan-dàlana be loatra amin'ny fandaharam-potoana sy ny fandraisam-ponenana, manoloana ny fiavahan'ny fihetsiketsehana "akanjo mavo". fa "Ny mpitarika raharaham-barotra dia manambara ny fitomboan'ny asa amin'ny volana Febroary"taorian'ny fihenan'ny tato anatin'ny telo volana farany, hoy ny Bank of France.
Vakio koa Ny fitomboana Frantsay dia nilatsaka tamin'ny 1,5% tamin'ny 2018
Mitombo ny tahiry
Manantena ny governemanta ny Hiverina amin'ny asa, noho indrindra indrindra ny fepetra nambara tamin'ny hetsika "Mavo palitao". Ireo fepetra Nahatratra in tanteraka ny iraika ambin'ny folo lavitrisa euro, dia tokony hamerina tokoa mividy hery frantsay tokantrano ary mamela ny Hiverina amin'ny mpanjifa, ny tena mpamily ny asa ara-toekarena any Frantsa.
Mpahay toe-karena fa ny sasany matahotra fa ny mividy herin'ny vola, izay tokony tonga 2019 440 euro eo ho eo isan-tokantrano, araka ny toekarena frantsay Observatory (OFCE), hiteraka fitomboan'ny ny tahirim-bola, miaraka amin'ny . Manana isika "Fitomboan'ny fitomboan-kery izay mitoetra na dia eo aza ny tsy fitoviana ara-tsosialy Eoropeana sy manerantany", te-hanome toky ny Alahady ny Minisitry ny Toekarena, Bruno Mayor, eo an-dalam-be iray amin'ny forum iraisam-pirenena ao Dubai.
Ao amin'ny volavolan-dalàna ataon'izy ireo, ny governemanta dia mitazona ny fitomboan'ny 1,7%. Saingy nanolo-kevitra ny Ben'ny tanàna vao haingana fa azo atao io tanjona io noho ny fitontongan'ny toekarena manerantany. Ao amin'ny farany forecast nivoaka Alakamisy, ny Fikambanana ho ara-toekarena mpiara-miasa sy ny Fampandrosoana (OCDE) hoy Betting amin'ny fitomboana ao an-trano lehibe vokatra (harin-karena faobe) 1,3 2019% ihany. Ny Banque de France, ho azy, dia miandry ny fivoaran'ny 1,5%.
Lahatsoratra natokana ho an'ireo mpanjifanay Vakio koa Mitombo ny fivoarana any Eorôpa andrefana
Manaova valin-kafatra na jerena ny tsikera rehetra
Nivoaka voalohany ity lahatsoratra ity https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/11/la-croissance-francaise-devrait-atteindre-0-4-au-1er-trimestre-selon-la-banque-de-france_5421932_3234.html?xtmc=france&xtcr=8
India: Hihaona ny mpanoratra izay nanoratra ny tantara voalohany in 80 taona | India News
2018 lasa miadana kokoa fampisehoana Afrikana Société générale Group